TRF internetka - Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn TRF ee internetka
Dhawaan Hay'adda Reward Foundation waxay gacan ka geysaneysay noocyo kala duwan oo barnaamijyo iyo barnaamijyo kale ah oo laga sii daayay internetka. Kuwaas waxaa ka mid ah shaqo loogu talagalay dhagaystayaasha Boqortooyada Midowday (UK) iyo sidoo kale waxyaabo adduunka ka socda.
Wax kasta oo halkan lagu soo bandhigay MA laga heli karo bartayada YouTube channel. Waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo halkaa jooga, markaa fadlan kafiiri halkaas sidoo kale.
Madasha Dhaqanka Cusub
Sideen Uga Walwalsanahay Waxyaabaha Ku Saabsan Filimada Internetka? Miyay tahay, ama la qaban karaa, wax kasta oo la qaban karo? Mary Sharpe ayaa ku biirtay guddiga barnaamijkan caanka ah. Madasha Dhaqanka Cusub waxay barnaamijkan ku soo bandhigtay kanaalka ay ku leeyihiin YouTube markay ahayd 19 Febraayo 2021.
Kanaalka Wararka ee SMNI
Kanaalka Wararka ee SMNI ee Filibiin kuyaala wareystay Darryl Mead iyo Mary Sharpe taxanahooda gaarka ah ee Xumaanta filimmada ee internetka. Barnaamijku wuxuu ku qoran yahay luuqada Filibiin qaybaha ay ka muuqato Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta ee Ingiriisiga.